Android ဖုန်းတွေမှာမြန်မာစာ အမှန်မြင်ဖို့အတွက်4Myanmar FB APK | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Android ဖုန်းတွေမှာမြန်မာစာ အမှန်မြင်ဖို့အတွက်4Myanmar FB APK
Posted on November 6, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းသုံးတဲ့ အခါမှာ အဓိက ပြသာနာတစ်ခုက ဝဘ်ဆိုဒ်တွေဝင်ရောက်ပြီး စာဖတ်တဲ့အခါမှာ မြန်မာစာလုံးတွေကို အမှန်မမြင်ရပဲ တစ်ခါတစ်ခါ မြန်မာစာလုံးတွေ အတုံးလေးပုံစံလေးတွကို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို သုံးထားပြီး တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ ကုဒ်ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို သုံးပြီး ရေးထားတတ်ပါတယ်။
ဒီလို ပြသာနာတွေကို စာဖတ်သူများမှာ ကြုံတွေ့နေတယ် ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့4Myanmar FB လေးကိုသုံးကြည့်ပါလို့ အကြံပေး ပါရစေဗျာ။ ဇော်ဂျီနဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ် နှစ်မျိုးလုံး Support လုပ်ထားပါတယ်။ Support Zawgyi and Myanmar Unicode ချိန်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။4Myanmar FB လေးက ဝဘ်ဆိုက်တွေ ဝင်တဲ့အခါမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ယူနီကုဒ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာလုံးတွေကို အမှန်မြင်ရတဲ့ Facebook App လေးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တစ်ချို့ဖုန်းအသစ်တွေမှာ မြန်မာစာထည့်ဖို့ Root လုပ်ရပါတယ်။ Root လုပ်လိုက်ရင် ဖုန်းမှာ Ornagai (အသစ်အတိုင်း) မဖြစ်တော့ပဲ ဖြစ်သွားပါမယ်။4Myanmar FB လေးက Root လုပ်စရာမလိုပဲ ဒေါင်းပြီး တစ်ခါတည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်က 1.23 MB ရှိပါတယ်။ Android 2.2 နဲ့ အထက်မှာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က လိပ်စာလေးကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် Download နိုင်ပါတယ်။
Download Link သေ ၊ မသေ သိရန် အောက်က ပုံ ကို အရင် Click ကြည့်နိုင်ပါတယ်။။ New Tap ဖွင့်သွား ပြီး Webpage အသစ် ပေါ်လာရမည်။ အကယ်လို့ webpage မပွင့်လျှင် File Not Found ဖြစ်သွား တဲ့ အတွက် အခြား Mirror ကနေ ဒေါင်းပါ။ New Tap ပွင့်တယ်ဆိုရင် တော့ ပေါ်နေတဲ့ Webpage ကို ပိတ်ပစ်ပြီး Download Now Button ကို နှိပ်ပြီး အောက်က ကြိုက်နှစ်သက်ရာမှ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် … –
This entry was posted in Android Application. Bookmark the permalink.
← Download Marvels Agents of S.H.I.E.L.D 2013 HDTV Section 1 Episode5&6[240MB Each]
IOS သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတို့အတွက် itunes နောက်ဆုံးထွက် iTunes 11.1.3 လေးဒေါင်းရအောင် →